ब्रडवे म्यूजिकल - न्यूयोर्कमा गर्नु पर्ने एउटा चीज | यात्रा समाचार
न्यूयोर्कमा गर्नु पर्ने कुराहरु: ब्रॉडवे म्यूजिकलमा जानुहोस्
सुसाना Godoy | | आराम
न्यु योर्क ती ठाउँहरू मध्ये एक हो जुनसँग विशाल टुरिस्ट अफर छ। त्यसकारण त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन हामीले सँधै केहि दिनहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। ती सबै मध्ये, आज हामी सबैलाई एक सिफारिस गरेर र सबै दर्शकहरु को लागी रहनेछौं। ब्रडवे म्यूजिकल.
पक्कै पनि तपाईंले यसको बारेमा सुन्नुभयो वा हुनसक्छ तपाईं पहिले नै हुनुहुन्थ्यो। तर एक मार्ग वा अर्को, यो न्यूयोर्कमा गर्ने मुख्य चीजहरू मध्ये एक हो। ती मध्ये एउटा अविस्मरणीय क्षण जुन हाम्रो रेटिनामा रेकर्ड हुनेछ। हामी यस अवसरको साथ साथै आनन्द लिने छौं टाइम्स स्क्वायर, अन्तमा संगीत वा ओपेराको रूपमा केही नाटकहरूमा जानको लागि।
1 ब्रॉडवे र टाइम्स स्क्वायर भएर पैदल
2 किन ब्रॉडवे म्यूजिकलहरू एक अवलोकन अनुभव बन्न पुग्छन्?
3 हामीले खोज्न लागेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्यूजिकलहरू
ब्रॉडवे र टाइम्स स्क्वायर भएर पैदल
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, ब्रोडवे एक अवसर हो जुन स्थानको सब भन्दा प्रसिद्ध वर्गहरू मध्ये एक पार गर्दछ: टाइम्स स्क्वायर। पहिलो भाग सिटी हलबाट ब्रोंक्स सम्म। त्यसैले यसको मार्गमा यसले असंख्य सडकहरू साथै थुप्रै अवसरहरू छोड्दछ। तर यो सत्य हो कि ती सबै मध्ये, टाइम्स स्क्वायर एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। के कारणका लागि? खैर, किनकि यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ धेरै मनोरन्जन विकल्पहरू केन्द्रित छन्, us० भन्दा बढी थिएटरहरू हामी वरिपरि छन्। एउटा स्थान जुन सँधै व्यस्त हुन्छ, तर राम्रोसँग पत्ता लगाउन लायकको छ।
वर्गमा हामी हेर्नेछौं कि बत्तीहरू र संकेतहरू के ले हामीलाई समात्न सक्छन्। यदि तपाईं क्षेत्र अलि अलि पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने, कार्यक्रममा जानुभन्दा पहिले तपाईं त्यहाँका सबै थिएटरहरू थाहा पाएर गर्न सक्नुहुन्छ छैठौं एभिन्यू र आठौं एवेन्यू बीच। यस क्षेत्रबाट तपाईं केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिएटरहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, जस मध्ये हामी दुबै हाजेस्ट गर्न सक्छौं 'मजेस्टिक' र 'इम्पीरियल'।
किन ब्रॉडवे म्यूजिकलहरू एक अवलोकन अनुभव बन्न पुग्छन्?
जब हामी कुनै खास ठाउँमा यात्रा गर्छौं, हामी आफैंलाई यसको चलन र पर्यटन विकल्पहरूले हामीलाई टाढा दिन्छौं। यस अवस्थामा हामी कम हुन सक्दैनौं। किनकि ब्रडवे संगीतहरू यस क्षेत्रको अंश हुन्, यसको संस्कृति र यसको इतिहास। यो ती मध्ये एउटा हो जुन तपाईको जीवनमा कम्तिमा एक पटक बाँच्नुपर्दछ। किनकी यो एक सम्पन्न र अद्वितीय अनुभव हो, कुनै श doubt्का बिना। थप रूपमा, मनोरञ्जन संसारका धेरै प्रसिद्ध नामहरू र अनुहारहरूले पनि यस स्थानमा केही प्रदर्शन गरेका छन्। अगाडि नबढिकन, ग्रुपो मार्क्स, अड्रे हेपबर्न वा रॉबर्ट रेडफोर्ड बाट जेम्स डीन, मार्लो ब्रान्डो वा ग्रेस केलीलाई धेरै अरू मध्ये।
हामीले खोज्न लागेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्यूजिकलहरू
यो सत्य हो कि तिनीहरू धेरै भिन्न हुन सक्छन् र सम्पूर्ण परिवारको लागि। कहिलेकाँही तिनीहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर त्यहाँ केहिहरू छन् जो आवश्यक भन्दा बढी छन्। वास्तवमा सबैभन्दा लोकप्रिय हो 'शेर किंग', 'शिकागो' वा 'ओपेराको प्रेत'। तर 'शीर्षक', 'लेस मिसेरेल्स', 'ब्यूटी एण्ड द बिस्ट' वा 'मम्मा मिया' जस्ता अन्य शीर्षकहरू बिर्सिएन। जबकि 'अलादीन' वा 'फ्रोजन', तिनीहरू पनि अन्य प्रसिद्धहरू हुन्। यस्तो देखिन्छ कि डिज्नी-थीमाधारित मानिसहरू जहिले पनि शीर्ष स्थानहरू लिन्छन्। चाहे तपाइँ यी शीर्षकहरू, वा अरूलाई तपाइँ बिलबोर्डमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ मनपर्दछ, पृष्ठहरूमा अग्रिम टिकट प्राप्त गर्नु उत्तम हुन्छ जस्तो कि Helloticket, स्पेनिशमा एक वेबसाइट, जहाँ तपाईं यूरो र स्थानीय ग्राहक सेवाको साथ खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै जसो यी कार्यहरू हप्ता अघि बेच्ने गर्छन, त्यसैले हामी बाकस अफिसमा उनीहरूलाई नकिन्नुहोस्
यो सत्य हो कि हामीसँग सधै याद हुँदैन वा किनभने यो अन्तिम मिनेट निर्णय हो, कि हामीसँग टिकट छैन। चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि एकचोटि 'परिस्थितिमा', तपाईं तिनीहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं केवल एउटा कार्यक्रममा जान चाहानुहुन्छ, तर तपाईंमा कुनै एकको लागि कुनै भविष्यवाणी छैन, विशेष गरी त्यहाँ छ टाइम्स स्क्वायर स्टोर जुन टिकट बिक्री छ धेरै राम्रो मूल्यमा, किनकि तिनीहरू स्टेटको नजिकै सिटहरू छैनन्। तर हामी भन्छौ, यो विचार गर्न सधैं एक विकल्प हो। अर्कोतर्फ, उही थियेटरमा उनीहरूसँग टिकट पनि हुनेछ, र प्रदर्शनको पहिलो दिनमा बिहान सब भन्दा पहिले, तिनीहरू पहिलो आगमनको लागि छुट दिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » आराम » न्यूयोर्कमा गर्नु पर्ने कुराहरु: ब्रॉडवे म्यूजिकलमा जानुहोस्